Arsenal iyo Man oo damashaadey halka Chelsea,City,Reds lagu dhegey + Sawiro | HobyoNet.Com
Arsenal iyo Man oo damashaadey halka Chelsea,City,Reds lagu dhegey + Sawiro
Sports-hobyonet)Kooxda reer London ee Arsenal ayaa awoodeeda ku fur furtey kooxda yar ee ku cusub xagaagan premier League ee Southamtom markii ay uga badiyeen 6-1.
Goolka 1aad waxaa ka sahqeeyey Podolisk iyadoo ay iska dhaliyeen kooxda Southamton gaar ahaan Hooiveld, oo shabaqa ku celiyey si kama’a ah kubad uu soo tufey goolhayaha.
Arsenal ayaa heshay goolkeedii labaad,30 daqiiqo ka dib markii Lukas Podolski uu dhaliyey goolkii 2aad una ahaa kiisii 2aad ee labadii ciyaar ee u dheeley kooxdiisa, waxa ay aheyd laad xor ah oo uu si fiican u tuuray, isagoo goolka ka toogtay meel 25 yaardi u jirta.
ciyaaryahan Gervinho ayaa dhaliyey goolkii 3-aad iyadoo shan daqiiqo ka dib goolkii 4aad uu iska dhaliyey Clyne oo Southamton ka tirsan.
Ka hor inta aan la aadin xilligii nashada ayaa Arsenal laga dhaliyay goolkii ugu horeeyay ee xilli ciyaareedkan, waxaana qalad ku lahaa goolhayahooda Szczesny. Waxaana Southampton goolka u dhaliyay Daniel Fox.
Gervinho ayaa markii laga soo laabtey qeybtii nasasha dhaliyey goolkii 5-aad iyadoo uu kasoo shaqeeyey Ramsey oo birta garaacey,laakiin goolkii 6-aad ayaa yimid 88-daqiiqo dhamaadka markii ciyaaryahan Theo Walcott uu saxiixey inkastoo uusan ku dabaaldegin kooxdiisii hore.
Manchester United waxay 4-0 ku dhufatey kooxda Wigan kulan lagu ciyaarey garoonka Old Trafford,halkaasoo ay recoro dhinaca safashada ay ka sameeyeen 3da laacin ee Schholes,Giggs iyo Ferdinand.
Ciyaaryahan Paul Scholes ayaana hogaanka u dhiibay United daqiiqadii 51aad ee ciyaarta, isagoo kubad shabaqa ku hubsaday ka dib karoos ka yimid Nani, waxaana goolkaas uu ugu dabaaldegay kulankiisii 700aad ee uu u safto United.
Javier Hernandez ayaa goolkii 2-aad dhaliyey walow uu rigoore ka qasaariyey bilowgii kulanka kooxdiisa, waxaase labada gool ee kale kala dhaliyey yar yarka Buttner iyo Nick Powell sidaasina Wigan 4-0 lagu direy.
Hadii Arsenal iyo man U ay farxeen waxaa laga jejebiyey Chelsea iyo Man City oo lagu dhegey, Chelsea waxay 0-0 ku kala tageen QPR weliba salaanta laga diidey Tery iyo Cole oo cuqdad weyni kala dhexeyso Anton Ferdinand.
Manchester City oo koobka difaacanaysana waxay 1-1 ku kala tageen kooxda Stoke City,Tababaraha man City Roberto Mancini ayaa si weeyn u dhaleeceeyey garsooraha, isagoo goolka laga dhaliyey ee Crouch u dhaliyey Stoke City ku tilmaamey mid kubadda cagta shaqo ku lahayn ee basketball ay ahayd.
Fulham 3 – 0 West Bromwich A.
Aston V. 2 – 0 Swansea C.
Norwich C. 0 – 0 West Ham U.